DEG DEG:- Wariyaasha ka howlgala deegaanada Puntland oo goor-dhaw la isugu yeeray – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wariyaasha ka howlgala deegaanada Puntland oo goor-dhaw la isugu yeeray
Saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa goor-dhaw isugu yeeray wariyaasha ka howlgala warbaahinada madaxa-banaan ee ka howlgala deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo.
Wariyaashaasi ayaa lagu wargeliyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku yimaadaan, si loo geeyo deegaanka Af-urur oo ku dhaw degmada Galgala ee gobolka Bari.
Deegaanka Af-urur ayaa waxaa shalay weerar kusoo qaaday dagaalyahanadda Al-shabaab, waxaana weerarkaas ku geeriyootay in ka badan 50 askari oo ay ku jiraan saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Puntland.
Saraakiisha shalay ku dhimatay weerarkaasi ayaa waxaa ku jiray taliyihii ciidamada daraawiishta Puntland ee deegaanka Af-urur iyo ku-xigeenkiisa.
Al-shabaab ayaa ku faantay in weerarkaasi ay ku dishay 61 askari, iyagoona sidoo kale sheegay inay qabsadeen illaa 16 gaari oo kuwa dagaalka ah.
Dhinaca kale, saraakiisha ciidamada Puntland oo aynu goordhaw la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in markii ay gaaraan deegaanka Af-urur ay wariyaashaasi uga warbixin doonaan qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi, iyagoona halkaasi kusoo bandhigi doonno waxyaabaha xaqiiqda ah.